The History na Evolution nke Automobile Logos | Martech Zone
Visual mata bụ ihe dị mkpa karịa ọtụtụ ndị kwere. Akara anaghị anọchite anya akara, ọ na-enwe ọtụtụ nkọwa ma nwee ike ịchọta akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eguzogide ịgbanwe akara ngosi. Ha nwere ike ịbụ na ha ejirila ọtụtụ ego tinye ego, ma ọ bụ na-echegbu onwe ha gbasara ego na mbọ achọrọ mgbe a na-edegharị aha.
Ekwenyesiri m ike na imeziwanye akara ngosi gị iji mee ka ọ dị mkpa maka uto na ntozu okè nke ụlọ ọrụ gị - yana idobe ya n'oge a na nke dị mkpa nye ndị na-ege gị ntị. Ọ bụrụ na enwere ụlọ ọrụ ebe mgbanwe akara ngosi dị oke ọnụ - ọ bụ ụlọ ọrụ ụgbọala. Akara osisi abụghị naanị na mpempe akwụkwọ ikike ọ bụla, a na-ahụ ha ebe niile n'ụgbọ gị.
Legharịa anya oge ọzọ ị banyere n'ụgbọala gị the mkpuchi, oriọna ụzọ, mbadamba ala, oghere aka, ogwe aka, axis wiilị, ọbụlagodi na mpaghara injin. Ma ugbu a site na ngosipụta dị elu, a na-anọchi anya ha site na ntanetị. Ọbụna nke m na-agbagharị ma na-efegharị na ihuenyo.
Ọ bụrụ n ’inyocha logos ndị a, ị ga-ahụ na ọ fọrọ nke nta ka ha nwee ụdị ọdịdị dị iche na iche na ha. Echere m na nke ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe achọrọ ebe ọ bụ na ha batara n’ime ụgbọ ala ọ bụla. Ndị na-emepụta akara ọdịnala na-akpọkarị asị n'ihi na ha na-ahụ na akara ngosi dị mma na oji na ọcha, na igwe faksị, gafere na eserese mgbidi. Ma, ọ ga-abụ n'oge ndị ahụ.
Ka logos na-aga n'ihu, echeghị m na ha ga-aga n'ihu na-aga n'ihu… mana echere m na ha ga-anọgide na-enwe omimi na akụkụ ha. Ọbụna atụmatụ dị larịị nwere ọkwa nke omimi.
Ndị gụnyere na infographic bụ Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Fiat, Ford, Mazda, Nissan, Peugot, Renault, dakoda, Vauxhall, na Volkswagon. Ana m agbakwunye Chevrolet mgbe infographic ahụ maka ndị nke anyị n'akụkụ nke ọzọ nke ọdọ mmiri ahụ.
Tags: alfa romeologo alfa romeoihe martinakara aston martinAudiLogo logoAkara akpaakaBMWbmw akaracadillacnjirimara cadillacụgbọ ala na-ere ahịafiatlogo fiatikeAkara ngosilogo evolushọnlogo akụkọ ihe mere emeMazdalogo mazdaNissanlogo nissanbitgeotakara ngosi peugotaharenault logoochelogo ocheskodaAkara skodavauxhalllogo vauxhallVolkswagonlogo volkswagon
Kedu ihe na-eme ka Usoro Ọha Mgbasa Ozi Ọma?